एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैनः डा. शर्मा, महासचिव एनआरएनए – News Portal of Global Nepali
29/08/2021 मा प्रकाशित
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिव डा. हेमराज शर्माले संघलाई राजनीति हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपको बहस शृङ्खलाको ६२ औं भागमा एनआरएनए १० औं महाधिवेशन नीति र नेतृत्वको बहस कर्यक्रममा बोल्दै डा. शर्माले एनआरएनएका अधिकांश मुद्दाहरु राजनीतिसँग जोडिएको भए पनि एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताएका हुन् ।